China Yakanaka Logo Yakadhindwa Yakasviba Blue Paper Shipping Envelope Ine Ribhoni vagadziri uye vatengesi |Washi Makers
Rakanaka Rakadhindwa Rakasviba Pepa Rekutumira Envelope Ine Ribhoni
Product Code: Envelopu
Kutumira: Tsigira Express · Kutakura kwegungwa · Kutakura kwenyika · Kutakura kwemhepo
Material:Bepa reArt / Bepa rinonyorwa / Perarescent bepa / Kraft bepa / vellum bepa / nezvimwe.
Application:Shandisa yeDIY kana mhizha kana yekushongedza kwemazuva ese, kana shandisa yekushongedza rejenari
Ruvara:CMYK uye pantoni ruvara
Custom Package:Up bhegi / Customizable
Sample nguva uye Bulk nguva:Sample Process Time 5 - 7 mazuva Bulk Time Around 10 - 15 mazuva.
KutumiraNemhepo kana Gungwa.Tine chibvumirano chepamusoro chechibvumirano cheDHL, Fedex, UPS uye Mamwe Marudzi.
Mamwe Masevhisi:Tinogona kupa mahara samples usati waita kuwanda kuti uedze kunaka.Kana iwe uchinge watisarudza, isu tinokwanisa kugadzira dhizaini yako mune yazvino matekiniki masampuli zvakasununguka, nakidzwa nemutengo wedu wekuderedzwa!
Sarudzo yedu yehamvuropu ine yemhando yepamusoro graphical zvidimbu zveunyanzvi izvo chero munhu anogona kunyorera kunenge chero nzvimbo.Isu tinopa Multiple zvinhu, senge Kraft bepa, chena bepa, vellum bepa, Pearlescent bepa, nezvimwe.
Tinogona kugadzira chero chimiro maererano nezvido zvako uye zvaunofarira.Foil, kudhinda, kana kushama zvitayera zvakakurumbira.
▲ Chii chinonzi washi tepi & chii chinogona kushandiswa?
▼ Washi tepi ndeyekushongedza bepa masking tepi.Zviri nyore kubvarura nemaoko uye inogona kunamira panzvimbo dzakawanda dzinosanganisira bepa, plastiki & simbi.Nekuti haisi yakanyanya kunamira inogona kubviswa nyore pasina kukuvadza.Washi tepi ine kupenya kudiki uye inogona kushandiswa kune zvakawanda zvekugadzira zvinangwa sekunamira zvinhu kumadziro, kuvhara mahamvuropu & kurongedza, mapurojekiti ekushongedza imba, uye marudzi ese emapurojekiti ane mapepa.
Yakavambwa muna 2009, Vagadziri veWashi vakazvipira kugadzira akasiyana mapepa ehunyanzvi akasiyanakudhinda nekupedza matekinoroji, kusanganisira matepi akadhindwa emapepa, matepi efoiri, kits yekunamirwa, zvimiti zvekufa,mapepa emapepa uye mamwe emhando yepamusoro-yakaderera-tack adhesives.uye pepa rokudhinda.
Fekitori yedu yagara ichiisa iyo yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza level yezvigadzirwa munzvimbo yekutanga, saka zvigadzirwa zvesevakapasa bvunzo dzekuchengetedza kwezvakatipoteredza, uye zvigadzirwa zvine FCS certification mishumo, uyezvinhu zvedu mbishi zvinogona kunyatsoziva kuti ndeipi fekitari yehuni yavanobva.
Zvakapfuura: Amazon Recycled Pepa Yakagadzirirwa Fancy Dhizaini Offset Kudhinda Ndatenda Kadhi Rekukwazisa Kadhi Maposita ane Logo
Zvinotevera: Mabhomba Ghost Pins Black Skeleton Hug Muroyi Mabheji Skeleton Halloween Decor Lapel Pini